Washer Insimbi Engagqwali China Manufacturers & Suppliers & Factory
Washer Insimbi Engagqwali - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Washer Insimbi Engagqwali)
I-M3 Aluminium Falt Washers I-Washer iyisitha esisetshenziswayo phakathi kwezinto ezimbili. Imvamisa kuvimbela izinto ezimbili ukuthi zingaphansi kwengcindezi, ukugqwala kanye nokwanda kokushisa kwemvelo kanye nokuvuza. Ngoba ingaphezulu le-Machining alikwazi ukuphelela, i-washer ingagcwalisa ukungahleleki. Izitokwe...
egcizelele oyisisekelo insimbi engagqwali isikulufa isithuthuthu
Enziwe ngezifiso insimbi engenasisekelo yesikebhe sebhayisekili IHobbycarbon M4 insimbi engagqwali insimbi isithandwa kakhulu ngenxa yamandla aphezulu emakethe. Nasi isicoco sekhanda lesisekelo se-Stainless, ungabheka izithombe. Ngaphandle kwes scainless iron screw , titanium screw , aluminium screw , nylon isikulufa...
Washer Insimbi Engagqwali Insimbi Engagqwali Threaded Insimbi Engagqwali I-M3 Insimbi Engagqwali Insimbi Engagqwali A4 DIN912 Insimbi Engagqwali Amabhlogo Ensimbi Engagqwali Isongo Sensimbi Engagqwali